के हो आध्यात्मिकता ? कसरी बन्ने आध्यात्मिक ? « Mero LifeStyle
के हो आध्यात्मिकता ? कसरी बन्ने आध्यात्मिक ?
यदि तपाईं असीम (असीमित) हुन चाहनुहूुन्छ, अनि तपाईं यसलाई आफ्नो भौतिकताको माध्यमले पाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ भने, तपाईं मूलतः किस्ता-किस्तामा अनन्ततर्फ जाने प्रयत्न गरिरहनु भएको हुन्छ । के तपाईं १, २, ३, ४ गरेर गन्दै अनन्तसम्म गिन्ती गर्न सक्नुहुन्छ र ?
अतः यदि तपाईं असीम (असीमित) हुन चाहनुहूुन्छ, अनि तपाईं यसलाई आफ्नो भौतिकताको माध्यमले पाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ भने, तपाईं मूलतः किस्ता-किस्तामा अनन्ततर्फ जाने प्रयत्न गरिरहनु भएको हुन्छ । के तपाईं १, २, ३, ४ गरेर गन्दै अनन्तसम्म गिन्ती गर्न सक्नुहुन्छ र ? तपाईंको गिन्ती कहिल्यै टुङ्गिने छैन । यो सही तरिका होइन । तपाईं भौतिक साधनहरूको माध्यमले असीम प्रकृतिसम्म पुग्न सक्नुहुन्न । हरेक मनुष्य असीम हुन चाहिरहेको हुन्छ । यदि तपाईंले उसलाई उसले चाहेको सबैथोक दिनुभयो भने, ऊ तीन दिनसम्म ठिक रहन्छ । तर, चौथो दिन ऊ अरू केही खोज्न थाल्दछ ।
तपाईं आफ्नो लागि थोरै समय निकाल्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईं पूरै समर्पित, प्रतिबद्ध र एकचित्त हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई एउटा सरल अभ्यास सिकाउन सक्छौँ । हरेक दिन केवल २१ मिनेटको अभ्यासबाट (इनर इन्जिनियरिङ्ग), तपाईं आफूभित्र एउटा अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभवसहित आफ्नो दिनको सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो शक्तिशाली अनुभव, जसले तपाईंलाई पूरै दिन शान्त र आनन्दित बनाइ राख्दछ ।
केही मानिसहरू यसलाई लोभको संज्ञा दिन सक्छन्, तर म यसलाई गलत दिशामा चलिरहेको जीवन-प्रक्रिया भन्दछु । यदि तपाईं असीम प्रकृतिलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले त्यो आयामलाई अनुभव र अनुभूत गर्नुपर्छ जुन भौतिकभन्दा पर छ । केही यस्तो, जसलाई तपाईंले समुद्रमा हाम फाल्दा, कुनै हिमाल देख्दा, कुनै गीत गाउँदा, नाच्दा, आफ्ना आँखा बन्द गर्दा वा कुनै अनौठो तरिकाले स्पर्श गर्नुभएको हुन सक्छ । तपाईंले त्यसलाई छुनु त भयो, तर अब प्रश्न यो हो कि त्यसलाई कसरी थामी राख्ने ।